Unokundinceda ukuba ndiqonde iingongoma eziphambili zewebhusayithi ze-PR ezikwi-backlink?
Kakade, ukuba ufuna ukunyamekela ngokwenene, inkqubela phambili enokulinganiswa kwi-SEO, kubalulekile ukwakha iphrofayili yekhonkco esemgangathweni kwiwebhsayithi okanye kwiblogi. Kule mihla, kukho izinto ezintathu eziphambili ezenza "i-ideal" profile of backlinks - ukubaluleka kwabo, ubuninzi, kunye nomgangatho. Kubonakala ukuba zonke iinqununu zekhwalithi zakhiwa ngendlela engokwemvelo kwaye zivela kwimithombo ethembekileyo kuphela enekhasi eliphezulu le-PageRank, igunya lommandla, igunya lephepha, njl. Kodwa kuthetha ukuba kufuneka ukhethe kuphela ii-website ze-PR eziphezulu kwi-backlinks?
Ndiyakholwa ukuba akukho, ayikho. Kutheni njalo? Kungenxa yokuba izinto zangempela zinzima kakhulu. Ndiyathetha ukuba ukuba neendawo ezininzi ze-PR eziphezulu kwi-backlinks ngokusemandleni akunakuze zivumeleke ukuba zifike ndawo. Ngokubalulekileyo, sinokufumana kalula iPR9 entsha okanye mhlawumbi ne-PR10 backlink, umzekelo ukusuka kwi-WordPress. Yonke into inokugqitywa nje ngemizuzu - kwaye uyenziwe. Ngoko, ngaba u-backlink olo luya kuba luncedo, ucinga njani? Enyanisweni, akukho nto iqinisekisa i-backlink esanda kufakwa. Ndiyathetha ukuba i-backlink nganye eyahlukileyo yayiya kuba yinto engacaciyo kwaye ingabikho ngaphandle kokuba iya kuba yinxalenye ye-organic profile. Yingakho ndikhuthaza ukubheja kwiindawo ezininzi ukwakha izixhumanisi kunye neendawo ezininzi zeepolisi, ezifanele ukuba neentlobo ezahlukeneyo zamatrikrikhi ahlukeneyo, ngokuqinisekileyo zibandakanya ukungalingani kwekhasi le-PageRank.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba nenani elaneleyo lewebhu eziphezulu ze-PR ezikwi-backlinks. Into kukuba iinjongo ezinkulu zophando ezifana ne-Google ngokwayo zisebenzisa isethi yezinto ezintathu eziphambili (i. e. , ukuhambelana, ulwahlulo, kunye nomgangatho-inxalenye inxaxheba kwiprogram ye-PR) ukuchonga ubunzima boqobo kunye nokusebenza kwazo zonke i-backlink kwiprofayili yakho yewebhusayithi.Cinga ngezi zilandelayo zibonelelo eziphambili zokusebenzisa ii-website ze-PR eziphezulu kwi-backlinks. Qhubeka ukhumbula, nangona kunjalo, ukuba uya kukwazi ukuzonwabisa ngabo kuphela xa unomxholo ophezulu kunye nomxholo ochaphazelekayo.
IiNzuzo eziPhambili ze-Backlink ephakamileyo ze-PR:
Ukubonakala okusemthethweni kwewebhusayithi okanye iblogi, kwimbono yeenjini eziphambili ezifana ne-Google ngokwayo, kunye ne-Yahoo kunye ne-Bing.
Kungenzeka ukuba i-traffic ephawulekayo ithathwe kumakhasi akho ewebhu, ngokuqinisekileyo enikezelwa ukuba umgangatho wakho ophezulu kunye nomxholo ochaphazelekayo uyanele ngokwaneleyo ukutsala umdla othile kubasebenzisi bokwenyani ekugqibeleni uhlawule i-website yakho okanye ibhulogi.
Igunya elinamandla kunye nokuthembela ngenye imithombo egunyazisiweyo edibanisa imithombo yewebhu kunye nePRRR ephezulu iya kuqatshelwa nguGoogle njengombonakaliso ophezulu ophezulu, ngoko ukwenza iwebhusayithi yakho okanye iblogi izuze ukunikezelwa kwesithuba esiphezulu sesimo SERP.
Isikhundla esiphakamileyo sokwenza uphando ngokwayo sinikeza ithuba elifanelekileyo lokupompa intengiso ye-intanethi eyongeziweyo, ngenxa yoko ibonisa ukukhanya okuluhlaza ekutshekeni ngokubanzi kwi-intanethi yokukhangela, ngexesha elifanayo ukuguqula abathengi bakho kwizinto zangempela, ekugqibeleni ekuthengiseni okukhulu kwizinga.
Yenza ukuqaphela koluntu olubhetele, ngokuqhelekileyo ukuphucula ubukho bakho obukhompyutheni kunye negalelo kwigama legama elidumileyo lakho Source .